OpenRocket: rocket simulator yeiyo Linux distro | Linux Vakapindwa muropa
Chinyorwa ichi chakanangidzirwa ratidza OpenRocket, software iyo inonyatso kukufadza kana iwe uine mweya we "rocket engineer". Uye zvakare, kana iwe wanga uchinyatso kuteedzera iyo SpaceX yakavhurwa iyo yakaitwa nguva pfupi yadarika, iwe zvechokwadi uchada kuziva mhando iyi yechirongwa iyo inowanikwa natively yeLinux uye iyo iwe yaunogona kuwana mune mazhinji repos uye mashopu ekushandisa.
Kana iwe uri mutsva kuOpenRocket, iyi simulator yezvidiki rocket mamodheru akagadzirirwa kusvika kwakadzika kwakadzika uye kupora nenzira dzakasiyana. Rudzi urwu rwe maroketi evanovhiringidzaSekureva kweNational Rocket Association Kodhi Code, dzinofanirwa kunge dzakagadzirwa nemapepa, huni, plastiki, uye zvimwe zvisina kureruka zvinhu.
Nechirongwa ichi, iwe unozogona kuona kuverenga uye ita zvekufananidza yakakodzera nguva yako yemangwana dhizaini uye kuburitsa, saka inogona kushanda seyakanyanya rubatsiro.
Con OpenRocket uchava:
Zvese zvaunoda dhizaini, kutevedzera, uye kubhururuka zvirinani maroketi emhando.
Kuteedzera kwemahara nezvose zvinodiwa mabasa uye nenzira yakavimbika.
Inotevera-chizvarwa 6-degree-of-rusununguko kutiza simulation ine anopfuura makumi mashanu akasiyana. Kugona kuongorora ese maficha enzira.
Dhizaini dhizaini yemamodeli achishandisa tekinoroji yeCAD, uye pamwe nemukana wekuburitsa iyo modhi kuPDF.
Kugona kudzokorora ese maficha eanowanikwa kana nyowani mamodheru. Kubva pakukora kwezvinhu zvakashandiswa pakuvaka, kusvika kumagumo ekupedzisira. Ese nekutenda kune hombe katarogu yezvinhu uye zvigadzirwa.
Dhizaini yekugadzirisa ine chaiyo-nguva yekugadzirisa mune dhizaini modhi. AI mubatsiri kubatsira auto-kugadzirisa.
Yechokwadi-nguva yekuita data. Senge pakati pekumanikidza, nzvimbo yegiravhiti, kukwirira kwakanyanya, kumhanya kwakanyanya, kudzikama, nezvimwe. Zvese zvakagadziridzwa otomatiki iwe uchishanda.
Tsigiro yemazhinji-danho maroketi uye enjini mapoka. Ne OpenRocket iwe unogona kuronga zviitiko zvekubhururuka nematanho uye zviitiko zvezviitiko.
Kushandiswa kweinjini dzakanakisa uye dzakachengeteka dzemodheru yekutenda kune yayo DhataCurve injini dhatabhesi, kuve nekukwanisa kuwana yakakodzera kwazvo kune yako chaiyo modhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » OpenRocket: rocket simulator yeiyo Linux distro